"တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး" (Jordan Green) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
အောက်က blog post: မူလပျေါမှာထငျရှား အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုး (ခါးပန်း) ၏ website များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ဒါ့အပြင်အကျိုးစီးပွားအားဖြင့်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါသည် ရစ်ချတ် Wassersug ပါရဂူဘွဲ့, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကျွမ်းကျင်သူ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံဦးစီးဌာနနှင့်ဌာနဆေးပညာပါမောက္ခ:
သုတ်ရည်လွှတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်အကြားကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှု (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) ကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်သိရှိထားသည့်ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်ကောင်းအချက်အလက်များမရှိပါ။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်အန်ဒရိုဂျင်ဆင်းရဲချို့တဲ့သော MtF အတွက်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့တွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုအလွန်နည်းပါးပြီးအော်ဂဇင်၏စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုအကြိမ်ရေများပြားစွာရှိသည်။
အွန်လိုင်း porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များထဲမှာအတော်များများယောက်ျား "သုတေသနအဖျားမကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ " အကြောင်း, သူတို့လက္ခဏာတွေဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့လအနည်းငယ်, သူတို့အဘို့ porn အသုံးပြုမှုဖျက်သိမ်းရေးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမှကောလဟာလစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ ချင်နေကြတဲ့ကောလဟာလသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်အားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အမှန်မှာဤအဖိုရမ်များမကြာခဏသူလူပျို၏အများဆုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbating ၏ပဋိသန္ဓေ ယူ. မရနိုငျ (နှင့်အမှန်ပင်, ပထမဦးဆုံးမှာမကြာခဏပြုလုပ်စရာမလိုဘဲ masturbate မနိုင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပင်ယာယီမကြာခဏ porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ချီတုံချတုံဖြစ်ကြောင်း, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အဘို့သူတို့ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ masturbating မဟုတ်မှ။
တချို့ကတို့သညျဤကျယ်ပြန့် "ကနျြးမာအကြောင်းပြချက်များအတွက်မကြာခဏ masturbate ရမယ်" meme သူတို့ပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာ (ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, uncharacteristic လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, မငြိမ် porn အရသာမှတင်းမာမှုများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်သညျထပင်ပြီးနောက် porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းသတင်းပို့ စတာတွေကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှု) ။ ဒါ့အပြင်ဖြတ်ပြီးနောက်အချို့သောထိုကဲ့သို့သော epididymal သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်ယာယီဆုတ်ခွာအီရောဂါဗေဒဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏သက်သေအထောက်အထားများဖြစ်အံ့သောငှါစိုးရိမ်ကြသည်။
မကြာသေးမီကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်များ၏ဘာသာရပ်အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခေါင်းစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအတွက်ထင်ရှား "တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်အဘို့သက်သေသာဓက: ကျနော်တို့ကစီရင်ချက်ဖူးသလား?" ဒါဟာသုက်လွှတ်အကြိမ်ရေများနှင့်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာအပေါ် 16 စစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါစာရေးဆရာနည်းစနစ်သူတို့ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုတို့တွင်အကျယ်ပြန့်ကွဲပြားကြောင်းထောက်ပြသည်။ သူတို့ဟာအဘယ်သူမျှမတိုက်ရိုက်ရလဒ်များအထူးသတစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှု variable တွေကိုကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ အကာအကွယ်အသင်းအဖွဲ့များ (ကင်ဆာလျော့ချနှုန်းထားများ) ကလေ့လာမှုများ, နှင့်ထိန်းချုပ်ထား variable တွေကို (ဥပမာ, အသက်အပိုင်းအခြား) နှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုလူဦးရေတွင်ဤအစီရင်ခံဆနျ့ကငျြတွေ့ရှိချက်သုံးခု၏ (ခုနစ်ခု) ထက်ဝက်ထက်နည်းပါးလာအစီရင်ခံခဲ့သည်။
လေ့လာမှုများအရဘ ၀ ၌သန္ဓေတားခြင်းမကြာခဏဖြစ်ခြင်းသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည့်အတွက်ပုံမှန်မိတ်ဖက်လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိသောအမျိုးသားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည်။ သုသေသနပြုချက်တစ်ခုအရသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတိကျသောရှုထောင့်များ (ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုမနှိုးနှေးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း) သည်အဓိကအကာအကွယ်ဖြစ်စေသောအချက်များဟုတ်မဟုတ်မသိရသေးပါ။ စိတ်ရှုပ်ထွေးနိုင်ခြေရှိသောအချက်မှာပိုမိုကျန်းမာသောအမျိုးသားများသည်အနည်းဆုံး (အနည်းဆုံးမိတ်ဖက်များနှင့်) ပိုမိုသုက်ထွက်နိုင်သည့်အတွက်သုတ်ရည်ကြိမ်နှုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အခြားလေ့လာမှုများသုံးခုစာရေးသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူ correlating ကင်ဆာတိုးမြှင့်နှုန်းထားတစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ခွောလေ့လာမှုများတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအန္တရာယ်ကြားကမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေး (အကာအကွယ်သို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာလူဦးရေတည်နေရာသို့မဟုတ်လေ့လာမှုနည်းစနစ်မှလေးစားမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာနှင့်အတူနောက်အဓိပ္ပါယ်ထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်လုပ်မျှော်လင့်ချက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်နိုင်သောပံ့ပိုးမှုများကို variable တွေကိုအပေါ်ကိုပိုပြီးသုတေသနပြုဘို့ခေါ်စာရေးဆရာများ။
(1) သုတ်ရည်လွှတ် (သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် nocturnal ထုတ်လွှတ်ပူးပေါင်းထိုကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအဖြစ်) အမျိုးအစားများ, အသက်အမျိုးအစားထဲမှာသုတ်ရည်လွှတ်၏ (3) ပုံစံလုပ်ရန်အမျိုးအစား (4) ထိုသို့သော prophylactic အသုံးပြုမှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ, မိတ်ဖက်အရေအတွက်, ကြိမ်နှုန်းကွာခြားနှင့်ဤပါဝင်သည် လိင်ကူးစက်ရောဂါ (ကာလသား) သမိုင်း, နှင့် (5) ကာလသားသမိုင်း၏အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလွတ်လပ်သောမှတဆင့်ကူးစက်သော။
တိုတောင်းသောများတွင်လက်ရှိသုတေသနသေးသောကျယ်ပြန့် meme ကိုအပြစ်လွတ်မပေးပါဘူး "မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုချွတ်ဖုိ့ပါလိမ့်မယ်။ " အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (အဝလွန်ခြင်း, လုပ်ငန်းခွင်ထိတွေ့မှု, အက်စ်တီအိုင်, အရေဖျားလှီး, vasectomy စပ်လျဉ်းအကြံပြုနှင့် / သို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပေမဲ့, မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်, သင်တန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု), ယနေ့အထိဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက်သာအသိအမှတ်ပြုအန္တရာယ်အချက်များအဟောင်းတွေအသက်, လူမျိုးနှင့်မျိုးနွယ်စုများနှင့်ရောဂါ၏မိသားစုသမိုင်းရှိပါတယ်။
လက်ရှိအကြံပြုအကာအကွယ်အစီအမံဆီးကျိတ်-တိကျတဲ့ကိုပဲစိစစ်, အာဟာရနှင့်အစားအသောက်ရွေးချယ်မှု, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားလူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်အပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံဖြစ်ကြသည်။
စာရေးသူထောက်ပြသကဲ့သို့, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဒိုင်းနမစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအရေးပါသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတားဆီးလိမ့်မည်ဟုထူထောင်မဟုတ်ပါဘူး။ မယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးများအတွက် panacea ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေကြောင်းအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် psychopathology နှင့် Non-ကင်ဆာဆီးကျိတ်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်.
အောက်ခြေလိုင်းယောက်ျားကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှယာယီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးဆိုလိုတယ်လျှင်ပင်, porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မကြောက်လိုသည်။ ဒါဟာအစသူတို့ကနောက်ဆုံးမှာအကောင့်သို့၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်အခွအေနတာ, သူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်သောသုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေထွက်တွက်ဆအဖြစ်သူတို့စိတ်ငြိမ်သက်ရှိနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။
တိုင်ပင်မှူးမတ်လည်းထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးတက်မှုကိုတားဆီးမည်ကို စိုးရိမ်. , ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအကြောင်းကို client များ '' ဖြစ်နိုင်သမျှစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှစေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်နှင့်တက်ကြွစွာသူတို့ကိုဖြေရှင်းလိုပေမည်။ လက်ရှိသုတေသန၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ၏တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုယောက်ျားရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုလျော့ချခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့ကို သာ. ကြီးမြတ်ဥပေက္ခာသမ္နှင့်အတူပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ recover ကူညီနိုင်ဘူး။